I-Vibenomics i-Audio ngaphandle kweNtengiso yeNtengiso: eyenzelwe wena, iNdawo yoMculo kunye neMiyalezo | Martech Zone
Intengiso yeVibenomics yeAudiyo yangaphandle kweKhaya: eyenzelwe wena, uMculo oSekwe kwindawo kunye neMiyalezo
NgoMgqibelo, nge-24 kaFebruwari ngo-2018 NgoLwesibini, Matshi 8, 2022 Douglas Karr
I-CEO ye-Prime Car Wash u-Brent Oakley wayenengxaki. Ukuhlamba iimoto zakhe zexabiso eliphezulu kwaba yimpumelelo, kodwa ngelixa abathengi bakhe babelinde kwimoto yabo, akukho mntu wayebabandakanya kwiimveliso ezintsha kunye neenkonzo ekufuneka bezinikele. Wenze iqonga apho anokurekhoda imiyalezo yobuqu, esekwe kwindawo kunye nomculo kubathengi bakhe.
Xa wayeqala ukukhuthaza ukufakwa kwefestile ngefowuni kwivenkile, wathengisa izisuli ngaphezulu kwenyanga enye kunaleyo wayithengisileyo kule minyaka mihlanu idlulileyo. UBrent wayesazi ukuba akanaso nje isisombululo kubathengi bakhe, wayeneqonga elifunekayo kushishino. Ke, walishiya ishishini lokuhlamba iimoto kwaye waqalisa Vibenomics.
IVibenomics yindawo esekwe kwindawo yentengiso ye-Audio Out-of-Home ™ kunye namava enkampani enika amandla amajelo omsindo kubathengisi, inika iibrendi amandla okuthetha nabathengi ngokuthe ngqo kwindawo yokuthengisa. Ngetekhnoloji enamandla esekwe kwilifu, ithala leencwadi lomculo elinelayisensi yangasemva, amandla okudibanisa idatha, iqela lenkonzo epheleleyo yeengcali zamava omsindo, kunye nothungelwano lwetalente yelizwi elifunekayo elifunekayo, inkampani ibonelela nge-vibe efanelekileyo yokuphucula ingeniso kubathengisi abangaphezu kwe-150 iindawo ezingaphezu kwama-6,000 kuwo wonke amazwe angama-49, afikelela kubantu abangaphezu kwezigidi ezingama-210.
Iivenkile zokuthengisa zihlala zihlawulela izisombululo zomculo onelayisenisi, kodwa iVibenmoics eneneni ibonelela ngomculo kunye nesisombululo somyalezo onembuyekezo kutyalo-mali.
I-Vibenomics inika amashishini ukufikelela kwilayibrari yomculo enelayisensi epheleleyo kunye ne-app ekulula ukuyisebenzisa evumela ukuba bangenise kwaye bafumane izibhengezo ezilungiselelwe, ezirekhodiweyo ngokomsebenzi kwangolo suku ucela ngalo. Amashishini akufuneki nokuba abe nexhala malunga ne-bandwidth okanye imiba yobugcisa - iqonga lisebenza kwiitafile ezine-Sprint-powered tablet. Yifake nje, kwaye uvuka kwaye uqhuba!
Ihanjiswa ngeplug-and-play eguquguqukayo, i-proprietary, i-IoT ivumele abadlali beendaba, i-Vibenomics isasaza ngokuguquguqukayo, iintengiso ze-audio ezifunwayo kunye noluhlu lokudlalwayo olugcinwe kuyo nayiphi na indibaniselwano yeendawo kuyo yonke indawo ekhula ngokukhawuleza yelizwe, ivula ijelo elitsha elinamandla lentengiso yabathengi. ukufikelela kubathengi ngexesha lamanyathelo okugqibela abalulekileyo endleleni yokuthenga. Ngenkqubo yeqabane lokuqala, abathengisi banokufumana inxalenye yengeniso yazo zonke iintengiso ezithengiswa yiVibenomics ezidlala ngaphakathi kweendawo zabo, zibanika amandla okwenza imali ngamaza abo angasese kunye nokuguqula iindleko zelifa kwiziko elitsha lenzuzo. .
Nge-Vibenomics, amashishini anokuqhuba ngeziphumo zeshishini:
Iimveliso Push ngokukhawuleza kwaye wandise ingeniso kubathengi bonke.
Fundisa abathengi kwiimveliso ezintsha kunye nezibonelelo njengoko zifumaneka
Qhuba abathengi kwiwebhusayithi yakho ngokukhupha kunye nokunyusa.
Ayinakuba nje amashishini apapashe eyawo imiyalezo, kodwa anokuvula inethiwekhi yawo kubakhangisi beqela lesithathu! Jonga zabo izisombululo Ukufunda okungakumbi malunga noku banokukunceda kumzi mveliso wakho.
Mamela udliwanondlebe noBrent Cela iDemo yeVibenomics
tags: yhooaooh ukuthengisamyalezoumculoOOHooh ukuthengisaintengiso yangaphandle kwekhayauthungelwano lwerediyoukuthengisa umsindomzantsi
Yeyiphi eyona ndlela ihamba phambili yefowuni, ikhamera yeDSLR, GoPro, okanye iMakrofoni?